Haverina ny hasin’ny Fitsarana, hoy i Clément Jaona presida vao voafidin’ny SMM – Ao Raha du 19 fevrier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Clément JaonaHaverina ny hasin'ny Fitsarana, hoy i Clément Jaona presida...
Clément JaonaNEXTHOPERANARISON TsilavoSyndicat des Magistrats de Madagascar
Haverina ny hasin’ny Fitsarana, hoy i Clément Jaona presida vao voafidin’ny SMM – Ao Raha du 19 fevrier 2019
Hampanjakaina ny tany tan-dalàna. lo no imasoan ‘ny filohan’ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM ) , Clément Jaona, mandritra ny telo taona hiasany. Maro loatra ireo fihoaram­ pefy sy ny tsy fanarahana ny lalàna izay misy eto amintsika.
Ilaina ny mamerina indray fa tsy misy ny ambonin’ny lalàna. «Aorian’ny fahalaniako, mbola hisy ny fihaonana faobe izay hatao. Hatolotra ireo telikasa izay efa novolavolaina. Ny hamafisina dia tsy maintsy hisy ny fanohizana ireo ezaka izay efa na tao niaraka tamin ‘ny filohan’ ny SMM teo aloha. Hojerena ny olan ‘ny fananantany, izay tena mampikaikaika ny rehetra . Hojerena ireo lany izay misoratra amin’ny fanjakana ara-dalàna ary anatin’ny vina ny hanaovana tanàna iray ho an’ireo mpitsara. Eo ihany koa ny hanaovana ny 9 desambra ho andron’ny mpitsara eto Madagasikara. Io daty io no namonoana, tamin’ny fomba feno habibiana, ilay mpitsara lany Toliara», hoy hatrany i Clément Jaona.
Himasoana tanteraka ny fanarenana ny tsy fampiharan-dalàna, izay miha mitombo hatrany ankehitriny. Tsy mahafa-po ny rehetra ny fampiharana ny lalàna, izay no mahatonga ny vahoaka ifotony mirona amin’ny Dina sy ny fitsaram -bahoaka. «Maro ireo raharaha ahitana tsindry hazolena toa ny ambonimbony sy ny mahitahita dia voaaro fa ireo vahoaka kosa voahitsakitsaka ny zony. Manomboka amin ‘ity taom-piasana ity dia tsy hikely soroka izahay ary hampaneno lakolosy mihitsy hiady amin ‘ny kolikoly amin ‘ny endriny rehetra sy eo anivon ‘ny sampandraharaha rehetra. Be loatra ny tsy mety eo amin’ny fitantanana sy ny tsy fampiharana ny lalàna. Hatramin’izay misy olona natahoran ‘ny lalana. Noho izany, ilaina ny fampitoviana ny rehetra», hoy hatrany ny filohan’ny SMM vaovao.
Nilaza ity farany fa hatao vaindohan-draharaha ny mba hampiharan ‘ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpisolo tena azy eny ifotony ny lalàna. « Maro ireo lalàna izay tsy vaovao tsy akory fa kosa izao vao mikofokofoka mampihatra azy ny rehetra ankehitriny, efa ezaka iray izay. Entanina izany ireo olona rehetra hiharan ‘ny tsy fanarahan-dalàna mba haneho ny heviny sy hangataka ny hanajana ny zo-ny», hoy ihany izy.
Previous articleLe nouveau président du SMM, Clément Jaona, prône l’application de l’Etat de droit – Expressmada du 19 février 2019
Next articleImpunité à Madagascar – D’autres dossiers en suspens – Les nouvelles du 19 février 2019